ပေလယာ - 🅟🅛🅐🅨🅔🅡🅢 ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး... - Yadanar 3D Cinema - BajarFB.com
Yadanar 3D Cinema •2years ago 43.7K 175 • 606.6K Views
ပေလယာ - 🅟🅛🅐🅨🅔🅡🅢 ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး
မင္းထြန္း ႏွင့္ လူလည္ ေက်ာ္ႀကီးတို့ေတြ႕ၾကေသာအခါ
ပေလယာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးအား ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးတြင္...
ေဆာင္းနွင္း သဇင္ သူေခ်8 months ago
Salai Kaung Htet Aung8 months ago
Bu Dah8 months ago
အစအဆံုးထြက္ၿပီလား ထြင္ရင္ တင္ေပးပါလား FB မွာ လိုက္႐ွာဒါ ေၾကာ္ညာေတြပဲ့ေတြ႔လို႔
Thar Thar5 months ago
ေက်ာ္ၾကားနဲ႔ အေမြစိန္ ဝိဥာင္
Sai Lin7 months ago
တအာင်းကရင် ငါရင်ခွင်1 year ago
အရှင် ဉာဏိန္ဒ4 months ago
ပန္းခ်ယ္ရီ1 year ago
SU SU1 year ago
KO KO1 year ago
ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး #FAN_Meeting မှာ ပျော်ကြမယ် ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ ဇာတ်ကားကြီးကို စတင်ပြသသည့် မတ်လ (၅)၊ (၆)၊ (၇) ရက်နေ့ ပထမဆုံး (၃)ရက် အတွင်း ကြည့်ရှုအားပေးမည့် ပရိသတ်များအတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ပိတောက် Fan Meeting ပွဲကြီး ရှိပါတယ်.. ❓ ဘယ်လိုပါဝင်နိုင်မလဲ? 👉🏼 မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ကြည့်ရှုကြမည့် မတ်လ (၅, ၆, ၇) ရက်နေ့များမှာ ...
Yadanar 3D Cinema
⫷⫷⫷ ရွာဇော်ကြီး ⫸⫸⫸ 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥𝐞𝐫 ဂျလုံးပလုံးကတုံးအလတ်ကောင်နဲ့ မှုံမှုံဝါးဝါးနုံနုံအအ မှုံကြီးတို့ရဲ့ ရွာဇော်ကြီး 🤠 🤓 ၂၇.၂.၂၀၂၀ Yadanar Cinema တွင်ပြပြီ ❗❗ ❗ နေတိုး အိန္ဒြာကျော်ဇင် နေနော် ယွန်းရွှေရည် နှင့် ဟာသသရုပ်ဆောင် အနုပညာရှင်များစွာပါဝင်သည်။ ❗ Lucky Seven Film Production.
𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 𝑻𝑬𝑨𝑺𝑬𝑹 " ပိုးက ကိုယ့်အတွက် ❝ 𝐙 ❞ နောက်မှာ ဘာအက္ခရာမှ မရှိတော့ဘူး " ❤️ Frenzo Production မှ တင်ဆက်လိုက်သည့် ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ သီချင်းရုပ်ရှင် 👉🏼 မတ်လ (၅) ရက်နေ့ Yadanar Cinema မှာ ပြပြီ 👈🏼 🎬 ဒါရိုက်တာ မီးပွား ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး ✨ ကျော်သူ၊ ဇင်ဝိုင်း၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ✨ ချိုပြုံး၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ မေသဉ္ဇာဦး နှင့...
မ်က္မွန္မွမပါရင္ ဘာမွမျမင္ရလို့ ခ်စ္စနိုးနဲ႔ "မွုံႀကီး" လို့ အလတ္ေကာင္ကေခၚတာ 😂😂 မွုံႀကီးဆိုတာ တသက္လုံး အလတ္ေကာင္ရဲ့ အနိုင္က်င့္ဗိုလ္က်သမၽွကို ခံလာရတာ... 📣📣 မွုံႀကီးက အျမဲတမ္း ႏုံတုံတုံအတတေပမယ့္ ခ်စ္ဖို့ေတာ့ေကာင္းသား 😍😍 ⫷⫷⫷ ရြာေဇာ္ႀကီး ⫸⫸⫸ ၂၇.၂.၂၀၂၀ Yadanar Cinema တြင္ျပျပ ❗❗ ❗ ေနတိုး အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ေနေနာ္ ယြန္းေရႊရည္ ႏွင့္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာပါဝင္သည္။ ❗ Lucky Seven Film Production.
⫷⫷⫷ ရြာေဇာ္ႀကီး ⫸⫸⫸ ရြာထဲမွာေျမႇာက္ႂကြေျမႇာက္ႂကြနဲ႔ ဂ်လုံးပလုံးကတုံး ❗ဂ်ပန္ကတုံးေတာ့မဟုတ္ ❗ ဦးတိုးႀကီးသားအလတ္ေကာင္ကတုံး 😂 တစ္ရြာလုံးရဲ့အခ်စ္ေတာ္ ေအာ္ေက်ာ့လန္ေလးကတုံး 😍 တစ္ရြာလုံးကို ဘယ္လိုေတြပတ္ေမႊမလဲဆိုတာ ⫷⫷⫷ ရြာေဇာ္ႀကီး ⫸⫸⫸ ၂၇.၂.၂၀၂၀ Yadanar Cinema တြင္ျပၿပီ❗❗ ❗ ေနတိုး အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ ေနေနာ္ ယြန္းေရႊရည္ ႏွင့္ ဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာပါဝင္သည္။ ❗ Lucky Seven Film Production.
ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣➡2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ နှစ်သစ်မှစ၍🎉🎉🎉 စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ ကြပါစေလို့ ကျွန်တော်တို့ Yadanar Cinema မိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါသည်ခင်ဗျ။🙏🙏🙏
မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် အချစ်ဆိုတာခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်ရတဲ့ နယ်ပယ်သစ်တစ်ခုဆိုတာ လက်ခံလား?? မိမိဘ၀တစ်သက်စာ ပုံအပ်ရမယ့် အချစ်ဆိုတဲ့အရာကို မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စတင်ရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာ မှန်သလား ??? အဲ့ဒီအတွက် လက်ထ..."> မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် အချစ်ဆိုတာခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်ရတဲ့ နယ်ပယ်သစ်တစ်ခုဆိုတာ လက်ခံလား?? မိမိဘ၀တစ်သက်စာ ပုံအပ်ရမယ့် အချစ်ဆိုတဲ့အရာကို မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စတင်ရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာ မှန်သလား ??? အဲ့ဒီအတွက် လက်ထ..." width="266" height="150">
မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် အချစ်ဆိုတာခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်ရတဲ့ နယ်ပယ်သစ်တစ်ခုဆိုတာ လက်ခံလား?? မိမိဘ၀တစ်သက်စာ ပုံအပ်ရမယ့် အချစ်ဆိုတဲ့အရာကို မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စတင်ရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာ မှန်သလား ??? အဲ့ဒီအတွက် လက်ထ..." class="text-decoration-none overflow-hidden d-inline-block text-break text-wrap text-dark fw-bold opacity-75" style="max-height: 42px;">"မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး (9.1.2020ရက်နေ့ မြန်မာတပြည်လုံးတွင် ရုံတင်ပြီ) 🖤Official Trailer🖤 မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် အချစ်ဆိုတာခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်ရတဲ့ နယ်ပယ်သစ်တစ်ခုဆိုတာ လက်ခံလား?? မိမိဘ၀တစ်သက်စာ ပုံအပ်ရမယ့် အချစ်ဆိုတဲ့အရာကို မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စတင်ရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာ မှန်သလား ??? အဲ့ဒီအတွက် လက်ထ...
မိုက်မဲချစ် >> 𝙾𝙵𝙵𝙸𝙲𝙸𝙰𝙻 𝚃𝚁𝙰𝙸𝙻𝙴𝚁 << 💘 မင်းရိုက်လို့ရခဲ့တဲ့ ငါ့ပါးကဒါဏ်ရာကို တချိန်ကြရင် မင်းကိုယ်တိုင် မင်းရဲ့အနမ်းနဲ့ ပြန်ကုပေးရလိမ့်မယ် 💘 📆 ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက် ကြာသာပတေးနေ့မှ စတင်ပြီး Yadanar Cinema အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ပြသပါတော့မည်။ #မိုက်မဲချစ် 💘 #InTheater_January9 💘 (ZawGyi) မိုက်မဲချစ် >> 𝙾𝙵𝙵𝙸𝙲𝙸𝙰𝙻 𝚃𝚁𝙰𝙸𝙻𝙴𝚁 << 💘 မင်းရိုက်လို့ရခဲ့တဲ...
#ချည် 𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑻𝑹𝑨𝑰𝑳𝙀𝙍 သင်.. အချစ်ကို ခံစားဖူးပါလား? နွေးထွေးတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားကို ❝ချည်❞ နဲ့အတူ ခံစားကြည့်ပါ .. ချည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး 📽 အောင်တိုင်းကျော် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ✍🏼 ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်း မင်းခိုက်စိုးစံ၊ ထက်မြတ်နိုင်ဇင် 🖊 ရိုက်ကွင်းဇာတ်ညွှန်း ဆဲဗင်းဒေး 🎬 ဒါရိုက်တာ ညွှန့်မြန်မာညီညီအောင် 💗 နေတိုး၊ သက်မွန်မြင့်၊ ရွှေသမီး 🎟 ဒီဇင်...